ne admin pane 2021-07-01
About Us Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co, Ltd. yakavambwa muna Nyamavhuvhu 2005. Iyo iri muHaiyan County, Jiaxing, China inova nzvimbo yepakati pehupfumi hwakagadzirwa Yangtze Rwizi Delta uye iri padyo neShanghai, Hangzhou neNingbo, zvakare saZhapugang-Jiaxing-Suzhou Expresswa ...
"Gadzira Chikwata kuburikidza Kubatana uye Kubatana" - Basa Rekuvaka Chikwata cheDhipatimendi Rekushambadzira reKangyuan Medical Rakasvika Kumugumo Unobudirira
Pakasvika chirimo, zvese zvakava zvipenyu. Musi waMarch 26, 2021, iyo Dhipatimendi rekushambadzira reHaiyan Kangyuan Medical Instrument Co, Ltd. yakabata chiitiko chekuvaka timu muNanbei Lake. Wese munhu akanakidzwa nebasa iri nekuseka, mufaro, nechido. Na9 o 'wachi mangwanani, Kushambadzira ...
2021CMEF: Kangyuan Inovandudza Hupenyu Hwakanaka neSainzi neTekinoroji
ne admin pane 2021-05-19
Musi waMay 13, 2021, iyo 84th China International Medical Equipment Fair (CMEF) ine dingindira re "new tech, smart future" yakaitirwa muShanghai National Convention uye Exhibition Center. Nevanhu vazhinji vakapinda muexpo, kubwinya kwechiitiko kwakapfuura chero chiitiko chakapfuura. ...
ne admin pane 2020-12-09
Iyo 19/10/2020 yaive kuvhura kukuru kwe83rd China International Medical Equipment Fair (CMEF) uye iyo 30th International Chikamu Chekugadzira & Dhizaini Ratidza (ICMD) muShanghai National Exhibition Center. Nhamba yakakura yemabhizimusi epamba akanaka chikamu ...
Laryngeal mask airway (LMA) chigadzirwa chinoshanda chakagadzirwa pakati pema1980 uye chinoshandiswa mune yakawanda anesthesia kumisikidza yakachengeteka nzira yekufema. Laryngeal mask yemhepo ine mhando yakanaka ine zvakawanda zvakanaka, senge nyore kushandisa, yakanyanya kubudirira mwero wekuisa, yakavimbika mweya, ...
Zvakadii nezve kangyuan's weti catheters
Shamwari zhinji dzinoshanda mumunda wezvinhu zvekurapa zvinondibvunza, ndechipi chikonzero nei Kangyuan's weti catheters aine mukurumbira wakanaka uye anogona kutengeswa mushe muEurope, America, Southeast Asia nedzimwe nyika zhinji? Ngatitaurei nezvazvo nhasi. Chekutanga pane zvese, th ...